Nhau - Nhatu nyaya dzinofanirwa kutariswa kana uchivhura iyo LCD skrini
Veruzhinji Kuona Monitor
4K Simbi Series
4K Plastiki Series
MM27 dzakateedzana dzakakombama
YM32 Series yakakombama
Nyaya nhatu dzinofanirwa kutariswa pakuvhura iyo LCD skrini
LCD yemvura yekristaro inoratidzirwa inoshandiswa mumagetsi mazhinji emagetsi muhupenyu hwedu, saka unoziva here kuti inyaya dzipi dzinofanirwa kutariswa kana uchizarura furu yeLCD mvura yekristaro inoratidzira? Dzinotevera inyaya nhatu dzinoda kutariswa.
1. Funga nezve tembiricha renji.
Kupisa kwakakosha paramende muLCD skrini. Kana iyo LCD iratidzwa yakavhurika, tembiricha inoshanda uye tembiricha yekuchengetedza inofanirwa kuverengerwa mumadhizaini ekugadzira ebhizinesi rekugadzira Kana iyo yakasarudzika tembiricha renji isiri iyo chaiyo, maitiro acho anononoka kwazvo mune yakaderera tembiricha nharaunda, uye mimvuri ichaonekwa mune yakanyanya tembiricha nharaunda. Naizvozvo, kana tichivhura chakuvhuvhu, isu tinofanirwa kunyatso tarisa mamiriro ekushanda uye tembiricha inodiwa yechigadzirwa.
2. Funga nezve maitiro ekuratidzira.
Kana LCD mold ichivhurwa, iyo modhi yekuratidzira inofanirwa kutariswa zvizere. Nekuti iyo LCD inoratidzira musimboti inoita kuti isavheneke, backlight inodikanwa kuti uone zvakajeka, uye iyo yakanaka yekuratidzira modhi, yakaipa kuratidza mode, yakazara hutachiona modhi, inochinja nzira, uye musanganiswa wemamodhi aya anotorwa. Imwe neimwe nzira yekuratidzira ine zvayakanakira uye hunhu, uye nharaunda yekushandisa inoshanda zvakare yakasiyana.
3. Funga nezvechikamu chinooneka.
Iyo inooneka renji inoreva nzvimbo iyo iyo pikicha inogona kuratidzwa pane iyo LCD skrini. Iyo yakakura nzvimbo, inowedzera kunaka uye ine simba iyo giraidhi iyo inogona kuratidzwa. Pane zvinopesana, iwo magirafu anoratidzwa mune diki yekuona renji haasi mashoma chete, asiwo zvakaoma kuona zvakajeka. Naizvozvo, kana uchitsvaga inozivikanwa LCD inoratidzira muforoma inogadzira kuvhura chakuvhuvhu, zvinodikanwa kuti utarise huwandu hwakawanda hunoonekwa hunodiwa zvichienderana nemamiriro ezvinhu chaiwo.
Idzi nyaya dziri pamusoro dzinoda kunyatso kutariswa paunenge uchiita LCD mvura yekristaro kuratidza kuvhurika muforoma, saka zvisinei kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvakagadziriswa, kuti uwane yepamusoro-soro LCD screen mold kuvhura mhedzisiro, kwete chete kuti uwane nyanzvi uye yakavimbika fekitori inogadzira, asi zvakare Kufunga zvakajeka nezvedambudziko uye kuve nechokwadi chekuzadzisa akasiyana zvidikanwi zvechigadzirwa.
Post nguva: Jul-16-2020
Yakakwana Ratidza Technology Co., Ltd.